क्षेत्र विस्तारमा वैद्यज् अर्गनाइजेशन | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल क्षेत्र विस्तारमा वैद्यज् अर्गनाइजेशन
on: २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:३७ कम्पनी प्रोफाइल, बजार
क्षेत्र विस्तारमा वैद्यज् अर्गनाइजेशन
अटोमोबाइल्स, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको वैद्यज् अर्गनाइजेशन अफ इण्डष्ट्रिज एण्ड ट्रेडिङ हाउसेस (भोइथ) शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न थालेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ सृजनात्मक काम गर्ने क्रममा भोइथले हरेक वर्ष ३ सय जना नर्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विराटनगरमा रहेको विजय एकेडेमी अफ हेल्थ एन्ड साइन्सले ४ वर्षे नर्सिङ कक्षाका साथमा गरीबहरूको सेवाका लागि अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी, नेपाल आमा एजुकेशन सिष्टमले सूचना प्रविधिमा स्नातक तहका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि भोइथअन्तर्गतको आमा एजुकेशन सिष्टमले फिलिपिन्सबाट सम्बन्धन लिइसकेको छ ।
भोइथले विद्युतीय साइकलको एसेम्बली गर्ने प्लाण्ट नेपालमै गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । चीनसँगको संयुक्त लगानीमा वार्षिक ७५ हजारदेखि एक लाखओटा विद्युतीय साइकल उत्पादन गर्ने वैद्यज् अर्गनाइजेशनले योजना बनाएको छ ।
वैद्यज् अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष सुरज वैद्यका अनुसार यीबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने योजना रहेको छ । उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामी यही मुलुकमा सम्भावना छ भनेर पर्खेरै बसिरहेका छौं । अहिलेसम्म बाहिर गएर काम गर्ने स्थिति आइपरेको छैन । यहाँको समस्या सुध्रिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा हामी लगानी गर्छौं । हामी नेपालको छोरो यहीँ मर्ने हो, यहीँ लगानी गर्ने हो, हामी पछि हट्दैनौं ।’ वैद्यज् अर्गनाइजेशनको सबैभन्दा बढी लगानी नै कृषिमा रहेको छ । धनकुटा र इलाममा उसले चिया उत्पादन गरिरहेको छ । नुवाकोटमा कफी उत्पादन र चिवनमा पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि लगानी गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष वैद्य भन्छन्, ‘जुन तरीकाले कृषिको विकास हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । मैले एक जिल्ला, एक उत्पादन भन्ने योजना नै अघि बढाएको थिएँ । केही काम पनि अगाडि बढेको छ । सिन्धुली र रामेछापमा ७ हजार ६ सय कृषक जुनारमा लागिरहेका छन् । हामीले दसौं हजार मेट्रिक टन जुनार नेपालबाट निर्यात गर्छौं भनेर हामीले सोचेका थियौं । हामीले विदेशबाट मेसिन ल्याएर लगानी पनि शुरू गर्यौं । तर, जुन प्रकारको जुनार आयो, एकदम दुःख लाग्यो । त्यसमा एक प्रकारको फ्रुट फ्लाई भन्ने कीरा पर्‍यो । यो समस्या कृषकले सल्टाउन सक्दैनन् । यसका लागि त सरकार नै लाग्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारको कृषिमा अझ लगानी हुनुपर्छ ।’
वैद्यज् अर्गनाइजेशनले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको थियो । तर अहिले प्राविधिक रूपमा सक्षम भइनसकेको भन्दै त्यसबाट हात झिकिसकेको छ । वैद्यज् अर्गनाइजेशनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा सम्भावना देखेको छ । त्यसैंले त्यस क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
टोयोटाको सफलताको कथा
अटो बजारमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले सन् १९३३ को सेप्टेम्बरमा किचिरो टोयोटाले स्थापना गरेको टोयोटा मोटर कर्पाेरेशन एक मोटर कम्पनी हो । किचिरोले आफ्ना बाबु साकिची टोयोडाले आविष्कार गरेको प्रोटोटाइप प्रविधिको आधारमा कम्पनी स्थापना गरेका थिए । अटो बजारका ऐतिहासिक घटनाक्रमको अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने किचिरोको कम्पनी स्थापना भएको वर्षदिनपछि प्रोटोटाइप प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलो प्रोटोटाइप यात्रु कार बनाएको इतिहास भेटिन्छ ।
टोयोटा मोटर एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा सन् १९३५ मा स्थापना भएको हो । कम्पनी स्थापना गर्ने परिवारको नाम टोयोडा भए पनि कम्पनीको पहिचान बन्ने नाम उच्चारण गर्न सजिलो होस् भनेर पछि टोयोटा राखिएको हो । अहिले टोयोटा विश्व बजारको एउटा स्थापित नाम हो । अहिलेको पुस्तालाई टोयोटा भनेको कारको पर्यायवाची नामजस्तै लागे पनि शुरूआती दिनमा यो कपडा उद्योगमा स्वचालित प्रविधिमार्फत लुगा सिलाउन प्रयोग भएको भेटिन्छ । टोयोटाले सन् १९३६ मा सोही स्वचालित मेशिन प्रयोग गरी यात्रु बोक्ने कार बनाएको हो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहन
सामाजिक हितकारी क्रियाकलापका साथमा वैद्यज अर्गनाइजेशनले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले विशेष गरी विपन्न वर्गको शिक्षा, वातावरण संरक्षण र खेलकुदमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । यो संस्थाले चिया बगान र कृषिमा आधारित उद्योगवरपर केही विद्यालयहरू निर्माण गरेको छ । ती विद्यालयमा विशेषगरी कामदारहरूका छोराछोरीले न्यून शुल्कमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । यसबाहेक अर्गनाइजेशनले देशका विभिन्न विद्यालयका अपाङ्ग र गरीब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, यसले १७ जना नेपाली विद्यार्थीलाई फिलिपिन्समा चिकित्सा शास्त्र, इञ्जिनियरिङ तथा कृषिमा उच्च शिक्षाका लागि प्रायोजन गरिरहेको छ ।
वैद्य अर्गनाइजेशनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यात्रु प्रतीक्षालय पनि निर्माण गरेको छ । यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र वन्यजन्तु आरक्षका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई सवारी साधन उपहार दिई यो संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै आएको छ । फूटबल खेलाडीलाई गाडी दिने प्रचलन बसालेको वैद्यज् अर्गनाइजेशनले अखिल नेपाल वार्षिक टोयोटा हकी प्रतियोगिता र एन्फा फूटबल प्रतियोगिता पनि प्रायोजन गर्दै आएको छ ।
वैद्यज् अर्गनाइजेशनको इतिहास
७ सय डलरको लगानीमा ५१ वर्षअघि ‘वैद्यज अर्गनाइजेशन अफ इण्डष्ट्रिज एण्ड ट्रेडिङ हाउसेज’ (भोइथ)को स्थापना भएको हो । हाल यो नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानामध्ये पर्छ । स्व.डा. विजयगजानन्द वैद्यले यसको स्थापना गरेका हुन् ।
सन् १९५७ मा भारतको कोलकाता विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्किएलगत्तै उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृतको जागीरमा प्रवेश गरेका थिए । तर, सरकारी जागीरले उनको चित्त बुझेन । काठमाडौंमा जन्मेका र विदेशमा पढाइ सकेका उनको चाहना पूरा गर्न सरकारी जागीरे जीवनमा सम्भव थिएन । त्यसपछि उनले अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड)मा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यही जागीरको क्रममा उनले नेपालका सबैजसो ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गरे । यहाँ पनि उनलाई पूर्ण सन्तुष्टि भने मिलेन ।
यूएसएडमा उनले ६ वर्ष काम गरे । आफ्नो चाहनालाई झनै साकार बनाउन अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुभवको आवश्यकता महशूस गरी उनी अमेरिका गए । वाशिङ्टन डीसीको एशियन रिसर्च सोसाइटीमा उनले १९६३ देखि १९६५ सम्म कामको अनुभव सँगाले ।
यसबाट उनलाई जागीरभन्दा आफ्नै व्यवसाय गरेमा सन्तुष्टि र स्वतन्त्रता मिल्ने अनुभव भयो । नेपालका जनतालाई रोजगार पनि प्राप्त हुने र आफूलाई पनि सन्तुष्टि मिल्ने भएकाले नेपालमै केही उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाई उनी स्वदेश फर्किए ।
तर, उनीसँग आफ्नो व्यवसाय गर्ने अनुभव थियो न उनी कुनै व्यावसायिक घरानाका सन्तति नै थिए । त्यसैले, व्यवसायका सबै काम उनले शून्यबाट गर्नुपर्ने थियो । यस क्रममा उनले कहिल्यै हिम्मत भने हारेनन् ।
व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न उनी त्यसपछि भारतको कालिङपोङमा बस्ने चिनियाँ नागरिक वाङजेङको सल्लाहमा चिनियाँ व्यवसायी च्याङलाई भेट्न हङकङ पुगे । वैद्यको व्यवसाय गर्ने इच्छा बुझी उनले त्यसका लागि जापानको टोयोटा मोटर्स जान सल्लाह दिए । वैद्य त्यसै वर्षको डिसेम्बर महीनामा ७ सय डलर बोकी जापान लागे । जापानको राजधानी टोकियो पुगी तात्कालीन नेपाली राजदूत भरतराज राजभण्डारीलाई आफू टोकियो पुग्नुको उद्देश्य बताए ।
त्यसबेला प्रतिष्ठित र महँगोमा गनिने टोयोटा मोटर्सले नेपालजस्तो सानो देशमा आफ्नो गाडीको आधिकारिक एजेण्ट नियुक्ति गर्ने कुरामा राजभण्डारी विश्वस्त हुन सकेनन् । तर, वैद्यले भने टोयोटालाई आफूले विश्वस्त पार्न सक्ने जिकीर गरे । त्यहाँ पुगेको तेस्रो दिन टोयोटाको मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी क्षेत्र हेर्ने वरिष्ठ अधिकारी नागाइसानसँग भेटे । त्यतिबेला उनी सफल हुन सकेनन् । तर, टोयोटाले उनलाई पुनः व्यवसायको विषयमा कुरा गर्न बोलायो । विभिन्न चरणको छलफलपछि टोयोटाका ६ ओटा गाडी विक्री गर्ने लक्ष्यस्वरूप वैद्यसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो । त्यति गाडी कति समयमा विक्री गरिसक्नुपर्ने हो, त्यसको समयसीमा भने तोकिएको थिएन ।
आफ्नो योजनाले पूर्णता पाएकामा हौसिएका उनी स्वदेश फर्किएलगत्तै टोयोटाका गाडीका बारेमा गहन अध्ययन गर्न थाले । गाडीका बारेमा आफू विश्वस्त भएपछि त्यसका सम्भावित ग्राहकको खोजी गर्न थाले । सोही वर्ष युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेटको स्थापना गरी नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक वितरक बने ।
शुरूमा आफू एक्लै काम गरेका उनलाई पछि सहकर्मी गौतमदास श्रेष्ठको साथ मिल्यो । दुवैको सहकार्यमा करीब ६ महीनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा ९७ ओटा बढी गाडी विक्री भए । करीब ६ महीनाको अवधिमै वैद्यले बहादुर भवनमा एउटा सानो कोठा भाडामा लिएर कार्यालयको स्थापना गरे । त्यसको १ वर्षको अवधिमै टोयोटाको मर्मत केन्द्र स्थापना गरी पार्टपुर्जा पनि उपलब्ध गराए । स्थापनाकालको करीब ३ वर्षकोे अवधिमै उनले ३ सय ५३ ओटा गाडी विक्री गरी आफू सफल विक्रेता भएको प्रमाणित गरे ।
लगानीमा विविधता ल्याउने र निम्न तथा सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तर उकास्ने सोचका साथ उनले अव व्यवसाय पनि शुरू गरे । अन्य व्यवसायीले आँट नगर्ने क्षेत्र उनका रूचिका क्षेत्र हुन्थे । हाल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, पर्यटन र विभिन्न भाषाको प्रवर्द्धन आदिमा पनि भोइथले लगानी गर्दै आएको छ । प्रत्येक व्यावसायिक संस्थाले नाफा मात्र कमाउने सोच बनाउनु हुँदैन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित यस संस्थाले वन्यजन्तु संरक्षण, धार्मिक तथा सामाजिक महत्त्वका सम्पदा, मठमन्दिर, नदीनाला आदिको संरक्षणमा पनि भोइथमार्फत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ
टोयोटाको नेपाल यात्रा
सन् १९६७ मा यूएसटी र टोयोटाबीच सम्झौता
सन् १९६९ मा नेपालमा पहिलोपटक टोयोटा कोरोना विक्री
सन् १९७३ मा पहिलो पटक कोरोला ट्याक्सी ।
सन् १९९६ मा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र संसद् सदस्यहरूलाई कोरोला र प्राडो गाडी वितरण ।
सन् १९९६ मा विकासे आयोजनाका क्षेत्रमा ल्याण्ड क्रुजरका सिरिज वितरण
सन् २००० मा १२ सिटे हाइस काठमाडौं पोखरा र विराटनगर रूटमा सार्वजनिक सवारीसाधनको रूपमा प्रयोग
सन् २००० मा टोयोटाका निर्देशक डा. टोयोटाको नेपाल भ्रमण ।
सन् २००३ मा भोइथ कम्प्लेक्स उद्घाटन
सन् २००५ बाट १६ सिटे मिनीबस सार्वजनिक यातायातको साधनको रूपमा सञ्चालन
सन् १९७३ मा ३एस सेवासहितको पहिलो शोरूम लाजिम्पाटमा उद्घाटन
सन् १९६८ देखि १९९७ सम्म सवारीसाधन मागबमोजिम वितरण (शोरुम थिएन नेपालमा)
सन् १९९५ मा एयरपोर्टदेखि माइतीघरसम्मको सडकमा बस स्ट्याण्ड निर्माण
सन् २००७ र २०१० मा टोयोटा महिला मोटर र्‍याली
सन् १९८५ मा रेडक्रसलाई एम्बुलेन्स वितरण
सन् २०१२ मा प्रायस हाइब्रिड कार सार्वजनिक
नेपाल वेलहोप एग्री टेक प्रालि वैद्यज् अर्गनाइजेशन र चीनको लाओनिङ वेलहोप एग्री टेकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्पनी हो ।
सर्भिङ माइण्ड प्रालि मर्कन्टाइलसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित छ ।
वैद्यज् अर्गनाइजेशन अफ इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिङ हाउसेस (भोइथ) ले यी सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार तथा सेवाबाट वार्षिक २० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने गर्दछ ।